‘अधिकांश ग्राहकको रोजाइ नेक्सन र एच फाइभ’ – Arthik Awaj
‘अधिकांश ग्राहकको रोजाइ नेक्सन र एच फाइभ’
By आर्थिक आवाज	 २०७६ आश्विन १७ गते शुक्रबार १०:१३ मा प्रकाशित
प्रवन्ध निर्देशक, दीप मोटर्स प्रालि, पोखरा
टाटाका साना गाडीहरुका लागि गण्डकी धौलागिरी क्षेत्रको आधिकारिक बिक्रेता हो दीप मोटर्स प्रालि । पछिल्लो समय टाटाले नयाँ बहुप्रतिक्षित गाडी एच फाइभ पोखरा सहित देशभरको बजारमा भित्र्याएको छ । टाटाको नेक्सन, टियागो, टिगोरलगायतका मोडलहरु पनि बजारमा बिक्री भइरहेका छन् । टाटाका यी गाडीहरुको माग, विशेषता लगायत बारेमा केन्द्रित रहेर प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक तेजराज बास्तोलासँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
टाटा कम्पनीका कुन–कुन मोडलहरु बजारमा आएका छन् ?
अहिले आएको सबैभन्दा लेटेस्ट भनेको एच फाइभ हो । क्रियोटेक २.० लिटर टर्बो डिजेल इन्जिनयुक्त टाटा एच फाइभ नेपाली बजारमा निकै चर्चित छ । एच फाइभमा रहेको इन्जिनले १३८ बिएच पावर र ३५० एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । टाटा एच फाइभ ल्यान्डरोवरको ओमेगा डि एट प्लेटफर्ममा निर्माण गरिएको गाडी हो । एच फाइभ गाडीसँगै टाटाको नेक्सन, टियागो, टिगोरलगायतका मोडलहरु पनि बजारमा छन् ।
ग्राहकको रोजाइमा कुन गाडी पर्छन् ?
धेरैजसो ग्राहकले एच फाइभ र नेक्सन गाडी रोज्छन् । एच फाइभ नयाँ गाडी हो भने पुरानोमा नेक्सन पनि ग्राहकको रोजाइमा परेका छन् ।
एच फाइभ र नेक्सन नै रोज्नुको कारण के होला ?
एच फाइभमा ल्याण्डरोभर र ज्याकवार छ । जुन ग्राहकको रोजाइमा परेको छ । यसलाई ग्राहकले राम्रो भन्दै मन पराएका छन् । ल्याण्डरोभर र ज्याकवारका कारण एच फाइड टाटाको बेष्ट हो भन्ने भएको छ । यसमा लेटेस्ट अप्सन छ । इञ्जिन राम्रो छ ।
एच फाइभ र नेक्सनको लक्षित समूह कुन हो ?
एच फाइभ अलि महंगो छ । यो सौखिनहरुका लागि ल्याइएको हो । यो गाडीमा डाक्टर, इञ्जिनियर, उद्योगी, व्यवसायीसहित धनीहरुका लागि भनेर बजारमा ल्याइएको हो । नेक्सन सबै लेवलका लागि उपयुक्त छ । विशेष गरेर युवा समूहलाई लक्षित गरेर ल्याइएको र रोजाइ पनि उनीहरुकै छ यो गाडीमा ।
मूल्यचाहिं कति कति पर्छ यी गाडीहरुको ?
टाटाका गाडीहरु सस्तोमा सस्तो र महंगोमा महंगो दुबै छन् । हामीसँग टाटाको २१ लाख ५५ हजार रुपैयाँदेखि ९१ लाख ५५ हजार रुपैयाँसम्मका गाडीहरु छन् । जस्तो टियागो २१ लाख ५५ हजार पर्छ भने हेक्जा गाडीको ९१ लाख ५५ हजार मूल्य पर्छ । एच फाइभ कारको ५६ लाख ५५ हजार रुपैयाँदेखि ७४ लाख ५५ हजार, नेक्सनको ३५ लाख ९९ बाट ४९ लाखसम्मको गाडीहरु छन् ।
गाडी चढ्नेलाई कुन गाडी चढ्न सुझाव दिनुहुन्छ ?
म गाडी चढ्नेलाई नेक्सन गाडी चढ्न सुझाव दिन्छु । यो गाडी सुरक्षित छ । भारतको सबैभन्दा सुरक्षित (सेफेस्ट) गाडी भनेर नेक्सनलाई चिनिन्छ । त्यस्तै एच फाइभ पनि राम्रो छ । यो गाडी नेपालको बाटो सुहाउँदो ग्राउण्ड क्लियरेन्स भएको गाडी हो । पहिले पहिले टाटा भनेको बलियो हुन्छ तर लक्जरियस होइन भन्ने थियो । तर अहिले टाटामा पनि अप्सन बनेको छ । टाटाको एच फाइभ लक्जरियस पनि छ । सुरक्षित (सेफ्टी) पनि छ ।
अरु गाडी छाडेर टाटा गाडी चढ्नेहरु पनि हुन्छन् ?
हुन्छन्, हुन्छन् । एक्सचेञ्जको बेला धेरैले अन्य कम्पनीका पुराना गाडी ल्याएर टाटाको नयाँ गाडी लैजान्छन् । एक्सचेञ्जलाई टाटाले पनि प्राथमिकता दिएर अन्य कम्पनीका गाडीको उचित मूल्य दिने अनि टाटाको नयाँ गाडी ठीक मूल्यमा बेच्ने गर्छौं । अरु गाडी दिएर टाटा लैजान्छन भने त्यसलाई हामी मुख्य प्राथमिकतामै राख्छौं ।
टाटामा दशैं अफरचाहिं के छ ?
टाटामा साढे २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म क्यास डिस्काउन्ट छ । क्यास डिस्काउन्ट नलिनेलाई सिंगापुर टुर गराउँछौं । सिंगापुर टुर जोडीलाई नै लैजाने अफर छ । ६५ इन्चको टिभी, वासिङमेसिन, माइक्रो वेव ओभन पनि उपहार छ ।
नेपाली युवा उद्यमी मञ्च पोखरामा पुनित वैद्य
क्यान इन्फोटेकको सम्पूर्ण तयारी पुरा, नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनी गरिने
प्रविधिको सदूपयोग गर्न सके जीवन सहज
‘प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ’ (अन्तर्वार्ता)
महिन्द्राको इलेक्ट्रिक कार इएक्सयूभीको रेन्ज सार्वजनिक
पोखरामा खुल्यो सिंगोर्खा सेक्युरिटी सर्भिस, आफ्नै देशमा केही गर्ने नवीनको सोच